Nzira yekugadzira mwenje wemafuta neorenji - Ikkaro
kudzidziswa >> Kumba Ongororo >> Kugadzira rambi remafuta kubva muarange
Kugadzira rambi remafuta kubva muarange
Ichi chinhu chakadzidziswa neshamwari kare, Neranjisi uye nemafuta mashoma atinogona tora rambi redu remafuta mumaminetsi mashoma.
Ichokwadi kuti haishande kutivhenekera, asi inoratidzika kunge yakanaka sekushongedza husiku. Kana iwe uine chikafu chemanheru kana kana uchida ratidza kuziva panguva yekudya kwemasikati kana kudya kwemanheru neshamwari kana mhuri.
Kugadzira mwenje wedu, isu tinongoda izvo zvinotevera zvigadzirwa. Ranjisi neoiri shoma, ndatora imwe yacho uye yatove kushandiswa pakubika. Aya ndiwo marongedzero atinoita ;-)
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kubvisa ganda kubva ku orange kuchipatsanura kuita maviri hafu. Nezve izvo, isu tinomaka nebanga uye isu tinopatsanura nemunwe, muvhidhiyo inoita kunge iri nani.
Chikamu chinotinakidza zvakanyanya muswe, uyo watinozoshandisa se tambo. Tinofanira kubvisa chikamu ichi zvakanyatsonaka kuitira kuti chisatsemuka uye oiri inorasika mushure.
Nezvo iwe uri chaizvo akapedza rambi. Isu tinongofanirwa kudira mafuta mukati tichiita chokwadi chekuti yedu "tambo" yakanyatsonyoroveswa mumafuta.
Asi iwe uchaona zvese zvakanyatso kujekeswa nevhidhiyo. Kana iwe usingatitevere, nokunyora magwaro Ndiri kuda kutanga kutumira vhidhiyo yevhiki nevhiki
Pano ini ndinosiirawo mamwe mafoto eorenji. Inoshandiswa se kenduru, mwenje kana mwenje
Maitiro Ekugadzira Yakachipa Nylon Thread Refills Ye ...
Kuwanazve yekare Linux komputa
Mavhiri asina mweya kana asiri emweya
Tabby. Gadzira yako Yakavhurika Sosi mota
9 comments pane "Maitiro ekugadzira mwenje wemafuta neorenji"
Kukadzi 6, 2014 na7: 53 pm
Kukadzi 12, 2014 na2: 45 pm
Kurume 12, 2014 pa 2:57 am
zvakanaka uye zvakasikwa
Kurume 15, 2014 pa10: 13 pm
ummm, asi ndiyo tangerine, kwete orenji ummm
Chivabvu 20, 2014 pa8: 09 pm
Zvakanaka uye kunhuhwirira kweiyo yakafuma macitrus inofanirwa kunzwika
1 Chikunguru 2014 the 6:53 pm
Zvinogona kuitwa netenipi…?
Nyamavhuvhu 3, 2014 pa11: 50 pm
Mhoro, ndinovawana vakatonhorera, zviri nyore kumisikidza muchirongwa chechikoro Asi ini ndoda kuziva kana ndichigona kushandisa imwe mhando yemichero. Ndatenda.
Nyamavhuvhu 5, 2014 pa10: 49 pm
Zvakanaka, chokwadi chete chinhu chinoita kuti orenji ive yakakosha ndechekuti isu tinogona kutora mukana wemuswe unosara sechiuno. Handizive kana pamusoro pecitrus uine chimwe chibereko chine hunhu. Kana iwe ukaedza imwe uye inoshanda nemazvo, ndokumbira utizivise.
Nyamavhuvhu 8, 2015 pa12: 50 am
Orenji yakanaka haina kukuvadza iyo ecosystem